गरिमा विकास बैंककाे ऋणपत्र आजबाट खुल्यो, व्याज कति छ ? - Arthasansar
गरिमा विकास बैंककाे ऋणपत्र आजबाट खुल्यो, व्याज कति छ ?
विहीबार, १६ मंसिर २०७८, १० : ४८ मा प्रकाशित
गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आज (मंसिर १६ गते, बिहीबार) बाट ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे छ ।
बैंकले ७ वर्ष अवधिकाे "८.७५% गरिमा डिबेञ्चर, २०८५" काे नाममा प्रतिकित्ता १००० रूपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेकाे हाे । निष्कासन गरिएकाे कुल १० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये बैंकले सर्वसाधारणका लागि ४ लाख कित्ता र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई ६ लाख कित्ता बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएकोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ ।
बैंककाे उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
आज (मंसिर १६ गते, बिहीबार) बाट निष्कासन गरिएकाे उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा मंसिर २० गते र ढिलोमा पाैष १ गतेसम्मसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताहरूले एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो सेयर मार्फत अनलाईनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।